सत्याग्रही डा. केसीलाई अँगालेको धर्मशाला
पुनम बिसी सुर्खेत - बिहीबार, असोज १, २०७७
जुम्लाको खलंगाबाट करिव आठ सय मिटर दक्षिणतिरको उकालो लागेपछि दुई कोठे धर्मशाला देखिन्छ।
मुल बाटो छोडेर थप एक सय मिटर गोरेटोलाई पछ्यायो भने, धर्मशालाको आँगनमै पुगिन्छ।
वाविरा मष्ठ मन्दिरको आँगनमा बनेको धर्मशाला हो यो।
हुन त मष्ठ मन्दिरको मूल मन्दिर भने जुम्लाकै तातोपानीमा छ।
चन्दननाथ नगरपालिका–६ स्थित यो मन्दिरमा पूजाआजाका लागि मूल मन्दिर टाढा पर्ने भक्तजनका लागि सहज भएको छ।
रंगरोगनले चिटिक्क यो धर्मशालाले कर्णाली नदेखेको भने होइन!
समृद्वितर्फको कर्णालीको यात्रालाई यसले नजिकैबाट नियालेको छ। मनन गरेको छ।
खलंगा बजारको चिच्चाहटलाई माथि डाडाँबाट नियालेको अनुभव छ, धर्मशालासँग।
पड्किएका बन्दुकका धँुवाले धर्मशालाका मनरुपी भित्ता नजलाएका पनि होईनन्। ज्यानको बाजी थापेका घाइते सहिदलाई पनि कुनै दिन यही धर्मशालाले आश्रय दिएको पनि कहानी छ, इतिहास छ।
सेतो चुना र रातो गेरुले पोतिएका धर्मशालाका भित्ताहरु। हरियो रंगले सजिदै वरण्डाको टेकोमा भक्तजनका हेतु सधै छत थाम्ने काठका खाँबा छेउमै अहिले डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन्।
के थाह छैन धर्मशालालाई? प्रदेश वर्गीकरणका समयमा तत्कालीन अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा चलेका बन्दूकका आवाज पनि थाहा छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा सहिद भएकाहरुको कसिलो मुठ्ठी पनि देखेको छ, समृद्विका खोक्रम भाषण पनि उसले सुन्दै आएको छ।
र, आफ्नो १६ औँ सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीलाई जुम्लाबाट घिसार्दै हेलिकप्टरमा उडाएर काठमाडौं लगेको इतिहास पनि यो धर्मशालाले देखेको छ।
आमूल परिवर्तनको नारा बोक्दै नागरिकका आवाज बोल्नेहरुका लागि यो धर्मशालाले सधै साथ दियो।
अहिले फेरि १९औँ सत्याग्रहको घोषणा गरेका डा. केसीलाई पनि यही धर्मशालाले आफ्नो काखैमा च्यापेर गुन्गुनाएको छ। उनको भोको पेटमा सुम्सुमाएको छ।
हुन त दुई कोठे धर्मशालाले डा. केसीलाई भित्र नबोलाएको भने होइन। डा. केसी आफै धर्मशालाको वरण्डामा प्लाष्टिक बेरेर बस्ने ईच्छा देखाए।
अहिले फेरि यो धर्मशालामा परिवर्तनका आशा बोक्नेहरू भिड लागिरहेको छ। दैनिक २ सयजनाभन्दा बढी डा. केसीको समर्थनमा जुटिरहेका छन्।
तन्नेरी, वृद्व–वृद्वा, बालक सबैले अन्तिम आशाको ताली बजाइरहेका छन्। अठोटको मुठ्ठी कसिरहेका छन्।
सधै एक्लै बसेर खलंगा बजार चियाउने धर्मशालाले पनि आशाको ताली बजाइरहेको छ।
रात्रिकालीन समयमा अँध्यारोबाट उज्यालो खलंगा बजार चियाउने धर्मशालाले भने अहिले उज्यालो पाएको छ। र त, कर्णालीवासी भन्न थालेका छन् ‘जहाँ डा. केसी, त्यहीँ उज्यालो।’
डा. केसीले आफ्नो १९ औँ सत्याग्रह धर्मशालाबाटै सुरुवात गरेपछि अहिले धर्मशाला उज्यालो बनेको छ। भित्तामा लागेका टुक्कीले बनाएका धुवाका धर्साहरु मेटिने तरखरमा छन्।
टुक्की बाल्नुपर्दैन अब, चन्दननाथ नगरपालिकाले मंगलबारै सोलार जोडिदिएको छ।
सर्मथकहरुलाई घर फर्काएपछि डा. केसी पुनः सत्याग्रहको तेस्रो दिनलाई पर्खदै यही धर्मशालाको काखमा बिसाए।
सुरक्षामा स्थानीय युवाको साथ
१९ औँ सत्याग्रह जुम्लाको बाबिरा मष्ठ मन्दिरबाट सुरु गरेका डा.केसीको सुरक्षाका लागि हाल स्थानीय युवाहरु नै सक्रिय भएका छन्।
उनीहरू डा. केसीको सुरक्षाका लागि आलोपालो समय दिन्छन्।
डा. केसीका सहयोगी महेन्द्र कार्कीले भने, ‘उहाँको सुरक्षाका लागि हामी स्थानीय युवाहरुले नै व्यवस्था मिलाएका छौँ। रातिमा पनि आलोपालो समय छुट्टाएका छौँ।’
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हालसम्म कुनै स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था भने भएको छैन।
झन्डै दुई महिनाअघि कर्णाली आईपुगेका उनी कर्णालीका विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्यजाँच गरिरहेका थिए।
जुम्लाबाटै १९ औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि उनी पटक पटक प्रशासन तथा स्थानीय निकायको अवरोध र घेरावन्दीमा परेका थिए।
दुई वर्षअघि डा.केसीले जुम्लामै १६ औँ सत्याग्रह थालेका थिए।
तर त्यति बेला डा. केसीलाई सरकारले जबर्जस्ती हेलिकप्टरमा काठमाडौं पु-याएको थियो। त्यसबेला प्रहरी र उनका समर्थकबीच झडप हुँदा शिक्षण अस्पतालमा भौतिक क्षति समेत भएको भयो। कैयौ मानिस घाइते पनि भए।